स्थानीय सरकार नै कोरोनाका नाममा अनियमितता : खर्च देखिन्छ, काम देखिँदैन ! - Baikalpikkhabar
स्थानीय सरकार नै कोरोनाका नाममा अनियमितता : खर्च देखिन्छ, काम देखिँदैन !
काठमाडौं ,बैशाख १४/ कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को नाममा स्थानीय तहहरुमा अनियमितता थप बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति हो । उसकै प्रतिवेदनको आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर किन यस्तो भयो भनेर सोध्ने अधिकार रहन्छ । सोही बमोजिम उसले निर्देशन समेत दिन सक्छ । रातोपार्टीमा समाचार छ ।
मङ्गलबार, १४ बैशाख, २०७८, दिउँसोको ०४:०१ बजे